Mba tsy ho fampandrosoana hosoka… | NewsMada
Par Taratra sur 15/11/2021
Misy ny mari-pahaizana hosoka, didim-pitsarana hosoka, bokin’omby hosoka… Matoa mahavoafitaka olona izany; eny, na tomponandraiki-panjakana aza: misy antony ao. Mety noho ny fisian’ny gaboraraka amin’ny sehatra na rafitra itrangan’izany, ka sahy sy vitan’ny ny olon-dratsy ny manao hosoka na sandoka? Na efa fahazaran-dratsin’ny sasany ny fanatanterahana asa: tsy misy fanaraha-maso, tsy misy fanavaozana na fanatsarana ny fomba fiasa …
Tsy hita holazaina intsony amin’ny toy izany koa, ohatra, ny hoe mpitandro filaminana sandoka, ny mpiasam-panjakana matoatoa naman’ny mpisandoka ihany koa… Eo koa ny amin’ny fampiasam-bola hosoka amin’ny tsenambaro-panjakana, ohatra: alaina ny vola amin’ny fanorenana fotodrafitrasa, nefa tsy atao na zara fa vita. Tsy vaovao koa ny fanaovan’ny sasany fanambarana diso momba ny entana avoaka na ampidirina eny amin’ny ladoany.
Ny toy izany rehetra izany no mahavoa izay mandeha amin’ny fahamarinana sy fahitsiana? Eny, sanatria, mety hampalaina ny sasany hanao ny marina sy hanara-dalàna aza. Marina fa vitsy ao anatin’ny maro ny karazana hosoka na mpisandoka toy izany. Saingy mila diovina ny sehatra fantatra izao fa misy izany karazana fahalovana rehetra izany, izay ratsy lavitra noho ny kolikoly: mamitaka sy mitera-patiantoka ho an’ny hafa, mambotry firenena ankolaka na mivantana…
Efa nisy izany karazana fahalovana ny karazana hosoka sy fisandohana andraikitra toy izany hatramin’izay, fa izao vao manomboka miseholany sy tsy takona afenina etsy sy eroa? Na efa ela sy lalina ary saika nahahenika ny sehatra sy ambaratonga rehetra ny fahalovana… Hany ka toa efa fiainana sy fisainana, sanatria. Mila diovina sy havaozina ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga, raha tiana ny tena hisian’ny fandrosoana marim-pototra sy marin-toerana maharitra.
Mba tsy ho fampandrosoana hosoka no misy sy atao: misy ny ezaka saingy misy fahalovana mikiky anaty toy ny homamiadana. Izay no ilana ny fanorenana ifotony?